စိတ်​မ​ကောင်းပါဘူး SME တို့ – – Myanmar Forex Villa
www.wehaja.com on Mutual Funds
CibUO on အဆင်ပြေပြေဖြတ်သန်းချင်လျှင်
upcycled on AUDUSD(DAILY)
porn vids on AUDNZD (Daily)
GraceThils on အဆင်ပြေပြေဖြတ်သန်းချင်လျှင်
စိတ်​မ​ကောင်းပါဘူး SME တို့ –
SME ​တွေအတွက်​ သိန်း ၁ ​ထောင်​ အနဲဆုံး​ချေး​ပေးမယ်​ ဆိုလို့ဝမ်း မသာနဲ့ဦး …
SMEအသင်းဝင်​သွား​လျှောက်​ မိမိလုပ်​ငန်း ၂ နှစ်​အထက်​ရှိမှ အသင်းဝင်​ဖြစ်​ဖို့ အမြန်​ဆုံး ၂ လ ကြာမယ်​
SME အစစ်​​တွေက အ​ပေါင်​ပစ္စည်းက​တော့ ရှိကြမှာမဟုတ်​​တော့ သိန်း၂၀၀ က အများဆုံး အာမခံက ကြားထဲက ​ချေး​ငွေ အာမခံ လက်​မှတ်​ထုတ်​​ပေးမယ်​ အဲ့လက်​မှတ်​အတွက်​ တစ်​နှစ်​ အတိုးနှုန်းရှိပါတယ်​2% လား 2.5%လားး မသိဘူး
​ချေး​ငွေအမခံလက်​မှတ်​ က SME လုပ်​ငန်းတိုင်းကိုမ​ပေးဘူး တင်​ထားတဲ့လူ​တွေလည်းများတယ်​ စစ်​တဲ့အခါ ၁နှစ်​ စာ ​ငွေရှင်းတမ်း လုပ်​ငန်းလိုင်​စင်​ ၂နှစ်​ သက်​တမ်း အခွန်​​ဆောင်​မှတ်​တမ်း ​နေ့စဉ်​ဝင်​​ငွေ မှတ်​တမ်း ရှုံးအမြတ်​စာရင်း ပိုင်​ဆိုင်​မှုပစ္စည်းစာရင်း​တွေ တင်​ထား​လျောက်​ထားရတယ်​ ကိုယ့်​အလှည့်​​ရောက်​ဖို့… ဆိုတာ..ထားပါ​တော့ ​ရောက်​လာပြီဆိုရင်​ သူတို့ လာစစ်​မယ်​ သူတို့ကကြိုက်​ပြီဆိုရင်​ ကိုယ်​တင်​ထားတာ ၂၀၀ သူတို့တန်​ဖိုးဖြတ်​ရင်​​တော့ ၅၀ က​နေ ၈၀ ကြား… အဲ ဒီတော့ ..ရတယ်​ပဲထားပါအုံး… အာမခံက ​ချေး​ငွေ အာမခံ လက်​မှတ်​ရပြီဆိုတဲ့​နေ့က​နေ သူ့ကို​ပေးရမယ့်​ အတိုးနှုန်းစပါတယ်​ အဲ့ဒါရပြီဆို ဘဏ်​​ပြေး​ပေါ့ အစိုးရဘဏ်​​တော့မ​ပြောတတ်​ ပုပ္ပလိက ဘဏ်​ က​တော့ ပြန်​စစ်​​သေးတယ်​ စာရင်း​တွေ အကုန်​ အာမခံက စစ်​ခဲ့သလို သူတို့ ကြိုက်​ပြီဆိုရင်​ ငွေထုတ်​​ပေးပါပြီ …
ကဲ.. ​ငမွဲ SME ​​လေး​တွေရေ ​…ကျော်​ဖြတ်​နိုင်​ပါ့မလား ….
အ​ပေါင်​ပစ္စည်း​မြေ​တွေ အ​ဆောက်​အဦ​တွေ ပိုင်​ တဲ့လူ​တွေဆိုတာ ဒီ​နေ့ ဘယ်​လိုလူ​တွေများသလဲ….
ဘာအလုပ်​မှမရှိ ​မြေဝယ်​ထား အခန်းဝယ်​ထားသူ​တွေ
ဘဏ်​​ပေါင်​ထားပြီး ဂျမ်းဖြစ်​​နေတဲ့လူ ​မြေ​ဈေးအိမ်​​ဈေးကျလို့ ဂန့်​​နေတဲ့လူ​တွေ များမှများ.. အဲ့ဒီလူမျိုး​တွေဆိုတာ အဘ တို့ အမတို့ ကွီးတို့ခရိုတို့ ဘဏ်​တို့ရဲ့သားသမီး​ဆွေမျိုးမိတ်​​ဆွေ​ဘောစွဲ​ဘောမထမိန်​ခြုံကပ်​ဖား​တွေ ကအများစု ….
ခု​တော့ထပ်​​ထောပြီး ကြပ်​​နေတာ​တွေ ​​ချောင်​တော့မယ်​ ​ရောင်းမရတဲ့​မြေ​တွေအိမ်​ခန်း​တွေကို ဟိုမရောက်​ဒီမ​ရောက်​ သားသမီးဆွေမျိုး​တွေထည့်​ထားတဲ့ ကုပဏီ လုပ်​ငန်း​တွေထဲထည့်​ပြီး SME ဆိုပြီး​ငွေ​ချေးမယ်​ ​မြေပါ​တော့ ​ချေး​ငွေရဖို့ မြန်​လည်းမြန်​ ​ထောင်​ချီပြီး ရကြ​တော့မှာ​ပေါ့ ​ချောင်​လည်​သွားကြမှာပါ
ဘာဆက်​ဖြစ်​မလဲ ဂျာ​အေး သူ့အ​မေရိုက်​ပဲ​ပေါ့ ​ချေးသွားတဲ့​ငွေက လုပ်​ငန်းပြန်​မဖြစ်​လာဘူး ကားဝယ်​ ​မြေဝယ်​ အခန်းဝယ်​ ​ငွေတိုးပြန်​ချ ဒါ​တွေပဲ လုပ်​ကြ​မယ်​​လေ
​ငွေ​ချေးတယ်​ဆိုတာ risk factorများတယ်​​လေ လို့​ပြောမ လို့လား… ခင်​ဗျားတို့​ချေး​ငွေ ကိုက်​ထားတဲ့လူ​တွေ က ethic ရှိလို့လား ပြန်​​မေးလိုက်​ချင်​တယ်​
SME တိုးတက်​​စေချင်​လား … တကယ်​လုပ်​​နေတဲ့လုပ်​ငန်း ဆိုတာနဲ့ ​ချေး​ငွေ ကို ကြိုးနီ စနစ်​မပါပဲမြန်​မြန်​ဆန်​ဆန်​ချ​ပေးပါ ငါတို့အတွက်​ဆိုတာ​တွေ​တော်​ကြပါ​တော့
လူကိုတန်​ဖိုးထားရမယ်​ လူရဲ့သိက္ခာကို အ​ပေါင်​ပစ္စည်းအဖြစ်​ လက်​ခံနိုင်​ရမယ်​ လူကို ယုံရမယ်​
သန်း ၅၀ လုံး နီးပါး ဟာ ခင်​ဗျားတို့ကိုယုံလို့ ပုံအပ်​ခဲ့လို ခင်​ဗျားတို့ လက်​ထက်​​ ​ရောက်​လာပြီပဲ ခင်​ဗျားတို့ ဒီဘဝ​ရောက်​​အောင်​ လုပ်​​ပေးခဲ့တဲ့ လူ​တွေကို မယုံဘူးလား လို့​မေးချင်​ပါ တယ်​
အခုလို​ချေးတယ်​ဆိုတာခုမှမဟုတ်​ပါဘူး နှစ်​တိုင်းရှိပါတယ်​ ​ခေတ်​တိုင်းမှာလည်းရှိခဲ့တယ်​
စိတျမကောငျးပါဘူး SME တို့ –
SME တှအေတှကျ သိနျး ၁ ထောငျ အနဲဆုံးခြေးပေးမယျ ဆိုလို့ဝမျး မသာနဲ့ဦး …
SMEအသငျးဝငျသှားလြှောကျ မိမိလုပျငနျး ၂ နှဈအထကျရှိမှ အသငျးဝငျဖွဈဖို့ အမွနျဆုံး ၂ လ ကွာမယျ
SME အစဈတှကေ အပေါငျပစ်စညျးကတော့ ရှိကွမှာမဟုတျတော့ သိနျး၂၀၀ က အမြားဆုံး အာမခံက ကွားထဲက ခြေးငှေ အာမခံ လကျမှတျထုတျပေးမယျ အဲ့လကျမှတျအတှကျ တဈနှဈ အတိုးနှုနျးရှိပါတယျ2% လား 2.5%လားး မသိဘူး
ခြေးငှအေမခံလကျမှတျ က SME လုပျငနျးတိုငျးကိုမပေးဘူး တငျထားတဲ့လူတှလေညျးမြားတယျ စဈတဲ့အခါ ၁နှဈ စာ ငှရှေငျးတမျး လုပျငနျးလိုငျစငျ ၂နှဈ သကျတမျး အခှနျဆောငျမှတျတမျး နစေ့ဉျဝငျငှေ မှတျတမျး ရှုံးအမွတျစာရငျး ပိုငျဆိုငျမှုပစ်စညျးစာရငျးတှေ တငျထားလြောကျထားရတယျ ကိုယျ့အလှညျ့ရောကျဖို့… ဆိုတာ..ထားပါတော့ ရောကျလာပွီဆိုရငျ သူတို့ လာစဈမယျ သူတို့ကကွိုကျပွီဆိုရငျ ကိုယျတငျထားတာ ၂၀၀ သူတို့တနျဖိုးဖွတျရငျတော့ ၅၀ ကနေ ၈၀ ကွား… အဲ ဒီတော့ ..ရတယျပဲထားပါအုံး… အာမခံက ခြေးငှေ အာမခံ လကျမှတျရပွီဆိုတဲ့နကေ့နေ သူ့ကိုပေးရမယျ့ အတိုးနှုနျးစပါတယျ အဲ့ဒါရပွီဆို ဘဏျပွေးပေါ့ အစိုးရဘဏျတော့မပွောတတျ ပုပ်ပလိက ဘဏျ ကတော့ ပွနျစဈသေးတယျ စာရငျးတှေ အကုနျ အာမခံက စဈခဲ့သလို သူတို့ ကွိုကျပွီဆိုရငျ ငှထေုတျပေးပါပွီ …
ကဲ.. ငမှဲ SME လေးတှရေေ …ကြျောဖွတျနိုငျပါ့မလား ….
အပေါငျပစ်စညျးမွတှေေ အဆောကျအဦတှေ ပိုငျ တဲ့လူတှဆေိုတာ ဒီနေ့ ဘယျလိုလူတှမြေားသလဲ….
ဘာအလုပျမှမရှိ မွဝေယျထား အခနျးဝယျထားသူတှေ
ဘဏျပေါငျထားပွီး ဂမျြးဖွဈနတေဲ့လူ မွဈေေးအိမျဈေးကလြို့ ဂနျ့နတေဲ့လူတှေ မြားမှမြား.. အဲ့ဒီလူမြိုးတှဆေိုတာ အဘ တို့ အမတို့ ကှီးတို့ခရိုတို့ ဘဏျတို့ရဲ့သားသမီးဆှမြေိုးမိတျဆှဘေောစှဲဘောမထမိနျခွုံကပျဖားတှေ ကအမြားစု ….
ခုတော့ထပျထောပွီး ကွပျနတောတှေ ခြောငျတော့မယျ ရောငျးမရတဲ့မွတှေအေိမျခနျးတှကေို ဟိုမရောကျဒီမရောကျ သားသမီးဆှမြေိုးတှထေညျ့ထားတဲ့ ကုပဏီ လုပျငနျးတှထေဲထညျ့ပွီး SME ဆိုပွီးငှခြေေးမယျ မွပေါတော့ ခြေးငှရေဖို့ မွနျလညျးမွနျ ထောငျခြီပွီး ရကွတော့မှာပေါ့ ခြောငျလညျသှားကွမှာပါ
ဘာဆကျဖွဈမလဲ ဂြာအေး သူ့အမရေိုကျပဲပေါ့ ခြေးသှားတဲ့ငှကေ လုပျငနျးပွနျမဖွဈလာဘူး ကားဝယျ မွဝေယျ အခနျးဝယျ ငှတေိုးပွနျခြ ဒါတှပေဲ လုပျကွမယျလေ
ငှခြေေးတယျဆိုတာ risk factorမြားတယျလေ လို့ပွောမ လို့လား… ခငျဗြားတို့ခြေးငှေ ကိုကျထားတဲ့လူတှေ က ethic ရှိလို့လား ပွနျမေးလိုကျခငျြတယျ
SME တိုးတကျစခေငျြလား … တကယျလုပျနတေဲ့လုပျငနျး ဆိုတာနဲ့ ခြေးငှေ ကို ကွိုးနီ စနဈမပါပဲမွနျမွနျဆနျဆနျခပြေးပါ ငါတို့အတှကျဆိုတာတှတေျောကွပါတော့
လူကိုတနျဖိုးထားရမယျ လူရဲ့သိက်ခာကို အပေါငျပစ်စညျးအဖွဈ လကျခံနိုငျရမယျ လူကို ယုံရမယျ
သနျး ၅၀ လုံး နီးပါး ဟာ ခငျဗြားတို့ကိုယုံလို့ ပုံအပျခဲ့လို ခငျဗြားတို့ လကျထကျ ရောကျလာပွီပဲ ခငျဗြားတို့ ဒီဘဝရောကျအောငျ လုပျပေးခဲ့တဲ့ လူတှကေို မယုံဘူးလား လို့မေးခငျြပါ တယျ
အခုလိုခြေးတယျဆိုတာခုမှမဟုတျပါဘူး နှဈတိုငျးရှိပါတယျ ခတျေတိုငျးမှာလညျးရှိခဲ့တယျ
Posted on January 5, 2018 Author Ko ThantCategories ဆောင်းပါး
One thought on “စိတ်​မ​ကောင်းပါဘူး SME တို့ –”
Previous Previous post: Finance အလုပ် အတွက် ကြုံတွေ့ရမယ့် Stress ကို ဘယ်လိုကျော်လွှားကြမလဲ
Next Next post: Forex Forecasting